LED Ummbila Lamp
LED Garage ukukhanya Series
LED IP64 corn ukukhanya Series
LED Dokha Khanyisa
LED Umsebenzi Khanyisa
LED Linear Panel Khanyisa
Shenzhen Youlumi Co.LTD ngokukhethekile yokukhiqiza LED imikhiqizo ukukhanyisa. Esiziqhayisa professional kanye nakho-R & D Ithimba bezimisela ukuba akwazi ukunqoba izingqinamba nezinselelo ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa nokusakazwa izigaba ukukhanyisa yokukhiqiza. Youlumi amalungu ethimba eyashukumisela iya intuthuko yenkampani ubuchwepheshe LED. Ukubeka lokuma izimbangi zayo embonini.
Umi Julayi 2012, sazibophezela esikhiqiza LED isibani nommbila ukukhanya imikhiqizo. Ngo-2013, sesiphumelele yacala ezintsha 150W futhi 200W corn izibani zethu eyayinekheli umshayeli esishunyekiwe. Umkhiqizo wethu ububanzi njalo ikhulisa futhi manje yakhiwa 250W, 300W njll onobuhle.
Sikhuluma nje, umuntu wethu iwuhlelo 250W corn ukukhanya nokumiselelwa kahle 400W futhi 1000W ofihliwe umthombo wokukhanya. Ngo-2014, retrofitting yethu kits e 80W, 100W njll okwahlukile imikhiqizo bafakwa emakethe. bay futhi emgwaqweni izibani zethu okusezingeni eliphezulu Uthole appraisals ezinhle eziningi yekhasimende.
Isicelo eyinhloko imikhiqizo yethu emafektri, zezitolo, izikhungo kwezohwebo kanye nezilungiselelo ahlukahlukene ongaphandle. Le mikhiqizo ngaphandle kwenziwa izindlela ezimakethe European futhi American. Imikhiqizo yethu enekhono esikhundleni yonke imithombo ukukhanya akusebenzi kuhlanganise CFL, HPS, LED UV elapha Amasistimu Metal Halide Globes ukuze kokuba ukunciphisa amandla ukusetshenziswa. Umgomo wethu oyinhloko ukusiza amakhasimende ethu nokuncipha izindleko ugesi kanye nokufeza isimo enviromentally enobungane.
Zethu inkampani isiqubulo, emakethe ngamakhasimende, ukugxila yokukhiqiza ngaphandle imikhiqizo ukuncintisana. Impela, sethemba ngoba kuzuzisa ukuthuthukiswa mutual nokubambisana.
Floor3, C Isakhiwo Chuangfu Industrial Zone, AiQun Road, Shiyan Town, Bao'an, Shenzhen, China